Izixhobo ze-infrared factory - i-china infrared Materials abavelisi, abaxhasi
I-DIEN TECH ibonelela ngokwahluka kwezinto ze-infrared ngokufana okugqwesileyo okubonakalayo, ukuxhathisa ukukhukuliseka kwesiseko se-asidi kunye nokusebenza okuzinzileyo kweekhemikhali zibaluleke kakhulu ziikristale zamehlo ezifakwe kwi-IR ye-waveband, kubandakanya iZnSe kunye neZnS. Ukulungiswa kwezi zinto ngokokuzoba kunye neeparameter zobugcisa.
Igermanium njengekristale yemono esetyenziswa ikakhulu kwi-semi-conductor ayisiyomfutho kwi-2μm ukuya kwi-20μm ye-IR. Isetyenziswa apha njengecandelo elibonakalayo lezicelo zommandla we-IR.
ICalcium Fluoride ine-IR ebanzi njenge-CaF ebonakalayo2 iifestile, iCaF2 Iifrimu kunye neCaF2 iilensi. Ngokukodwa amabakala amsulwa eCalcium Fluoride (CaF2) fumana usetyenziso oluluncedo kwi-UV kunye ne-UV Excimer laser windows. ICalcium Fluoride (CaF2) iyafumaneka nge-Europium njenge-gamma-ray scintillator kwaye inzima kuneBarium Fluoride.
I-ZnS ibaluleke kakhulu ziikristali zamehlo ezisetyenziswe kwi-IR ye-waveband. Ukuhambisa uluhlu lwe-CVD ZnS yi-8um-14um, ukuhambisa okuphezulu, ukufunxa okuphantsi, i-ZnS enenqanaba elinamacala amaninzi ngokufudumeza njl.njl.
I-ZnSe luhlobo lwezinto ze-mulit-cystal etyheli kunye neselubala, ubungakanani be-crystalline particle malunga ne-70um, ukuhambisa uluhlu ukusuka kwi-0.6-21um lukhetho oluhle kakhulu kwizicelo ezahlukeneyo ze-IR kubandakanya amandla aphezulu e-CO2 laser system.